Muujinta isleeg ka 21 ilaa 21 Bogga 5 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
2Ag2O + (Cho)2 → 4 Ag + (COOH)2
2 1 4 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Ag2O + (Cho)2 → 4Ag + (COOH)2
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ag (silver) iyo (COOH) 2 ()?
Dhacdada ka dib Ag2O (silver oxide) waxay la falgashaa (CHO)2 ()
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga (COOH) 2, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda (Cho) 2, la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Ag2O + (Cho)2 → 4Ag + (COOH)2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (CHO)2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (CHO)2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (CHO)2 () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta (COOH)2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (COOH)2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (COOH)2 () alaab ahaan?
Muujinta isleeg ka 21 ilaa 21 Page 5
Falcelinta Ag2O (bạc dibi) la falgal (CHO) 2 (Cunnada loo yaqaan 'Ethanedial hay Glyoxal') soo saaro Ag (BAC)
Falcelin soo saarta walax (CHO) 2 (Hayka Glyoxal ee Ethanedial) ()
CuO + C2H4(OH)2 → 2Cu + 2H2O + (Cho)2
Falcelin soo saarta walax (COOH) 2 (Axit oxalic) ()
H2SO4 + (COONa)2 . Na2SO4 + (COOH)2 3C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8 KOH + 8MnO2 + 3 (COOH)2 2 Ag2O + (Cho)2 → 4Ag + (COOH)2